အကောင်းဆုံး Glucoraphanin ထုတ်လုပ်သူ - Cofttek
Urolithin A&B Powder
မေလ 7, 2021
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Glucoraphanin အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ၁၈၀ ကီလိုဂရမ်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ရှိသောပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ရှိသည်။
Glucoraphanin (21414-41-5) Specifications
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 437.51 g / moll
နာမ်: 4-METHYLSULFINYLBUTYLGLUCOSINOLATE; 1-Thio-β-D-glucopyranose 1- [N- (hydroxysulfonyloxy) -5- (methylsulfinyl) pentanimidate]; 1-Thio-β-D-glucopyranose 1- [N- (Hydroxys) pentanimidate]; 5-Thio-β-D-glucopyranose 5- [N- (Hydroxys) pentanimidate]; methylsulfinylpentanimidate]; N- (Hydroxysulfonyloxy) -XNUMX- (methylsulfinyl) pentanimidothioic အက်ဆစ်β-D-glucopyranosyl ester; GLUCORAPHANIN POTASSIUM SALT (RG); GLUCORAPHANIN; GLUCORAPHANIN (POTUCSIA) GLASORAPHANIN (POTUCSIA) GLASORAPHANIN POTASSIHANIN POTUCUCSI
InChI Key ကို: GMMLNKINDDUDCF-RFOBZYEESA-M
ပျော်ဝင်: ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 mg / ml တွင်ပျော်ဝင်
သိုလှောင်မှုအခြေအနေ: အခန်းအပူချိန်မှာ Store က
လျှောက်လွှာ: ဂလူးကရိုဖာနင်သည်အစွမ်းထက်။ ကြာရှည်ခံသောဓါတ်တိုးပစ္စည်းဖြစ်သည်
Glucoraphanin (21414-41-5) NMR Spectrum
ဘာဖြစ်သလဲ Glucoraphanin (21414-41-5)?
ဂလူးကိုရာဖာနင်သည်ပန်းဂေါ်ဖီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီနှင့်မုန်ညင်းတွင်တွေ့ရသောဂလူးကို့ဆီနိတ်ဖြစ်သည်။ ဂlucoraphaninကို myrosinase အင်ဇိုင်းဖြင့် sulforaphane အဖြစ်ပြောင်းသည်။ အပင်များတွင် sulforaphane သည်အင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုတားဆီးကာရွေးချယ်သည့်ပantibိဇီဝဆေးဖြစ်သည်။ လူသားများတွင် sulforaphane ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး neurodegenerative and cardiovascular ရောဂါများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကြောင့်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းအမျိုးမျိုးကိုမွေးမြူထားသည်၊
Glucoraphanin (21414-41-5) အကျိုးခံစားခွင့်
ဂလူးကိုရာဖာနင်သည် Sulforaphane ၏အဓိကပျက်စီးစေသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ထိရောက်သောကင်ဆာရောဂါအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်တွေ့ရှိရသောအကောင်းဆုံးအပင်တက်ကြွပစ္စည်းဖြစ်သည်။
Glucoraphanin သည်အခြား antioxidant ပစ္စည်းနှင့်မတူသည်မှာသွယ်ဝိုက် antioxidant ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ Antioxidant effect ကရက်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ်
ဂလူးကိုရာဖာနင်ပန်းဂေါ်ဖီထုတ်လုပ်မှုသည်ပြင်းထန်သောအလင်းကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်စူးရှသော scytitis ၏တုံ့ပြန်မှုကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်
Glucoraphanin ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းထုတ်ယူမှုသည် AP-1 ကိုခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သက်ရောက်စေသောအလင်းအိုမင်းမှုကိုခံနိုင်ရည်ကိုထိရောက်စွာတားဆီးပေးသည်
Glucoraphanin Broccoli ထုတ်ယူမှုကရင်သားကင်ဆာကိုကာကွယ်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်အဆုတ်ကင်ဆာ၊ အစာပြွန်ကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာရောဂါများအတွက်၎င်းအားအောင်မြင်စွာနှင့်ထင်ရှားစွာပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
Glucoraphanin (21414-41-5) အသုံးပြုမှု?
ဂlucoraphaninကို myrosinase အင်ဇိုင်းဖြင့် sulforaphane အဖြစ်ပြောင်းသည်။ အပင်များတွင် sulforaphane သည်အင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုတားဆီးကာရွေးချယ်သည့်ပantibိဇီဝဆေးဖြစ်သည်။ လူသားများတွင် sulforaphane ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး neurodegenerative and cardiovascular ရောဂါများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
Glucoraphanin (21414-41-5) လြှောကျလှာ
Glucoraphanin အမှုန့် ရောင်းမည်(Glucoraphanin အမှုန့်အမြောက်အများကိုအဘယ်မှာဝယ်ယူရမည်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် Glucoraphanin အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစွာ၊ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည်။
 ဂျိမ်းစ်ဒီ။ ; Devaraj, S ။ ; Bellur, P ။ ; လာကာနာ၊ ဗီစီနီဂျေ။ ; Boddupalli, အက်စ် (2012) ။ "ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း sulforaphanes နှင့်ရောဂါ၏အသစ်သောအယူအဆများ - အဆင့် -၂ antioxidant နှင့် detoxification enzymes တွေကိုတိုးမြှင့် -glucoraphanin ပန်းဂေါ်ဖီဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်း" ။ အာဟာရသုံးသပ်ချက်များ။ 70 (11): 654-65 ။ Doi: 1111 / j.1753-4887.2012.00532.x ။ PMID 23110644 ။
 Jeffery, EH; ဘရောင်း, AF; Kurilich, AC; Keck, AS; Matusheski, N ။ ; Klein, BP; Juvik, ဂျာ (2003) ။ "ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းရှိဇီဝသက်ရှိအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်မှု" အစားအစာဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏ဂျာနယ်။ 16 (3): 323-330 ။ Doi: 1016 / S0889-1575 (03) 00045-0 ။
 အိုးကေ။ ; SangOk, K ။ ; Rak, C တို့ (2015) ။ “ Dolsan အရွက်မုန်ညင်း၏မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများတွင် Sinigrin ပါဝင်မှု” အစားအစာထိန်းသိမ်းရေး၏ကိုရီးယားဂျာနယ်။ 22 (4): 553-558 ။ Doi: 10.11002 / kjfp.2015.22.4.553 ။
 Cuomo, Valentina; လူစီယာနို, ဖာနန်ဒို B ကို။ ; Meca, Giuseppe; Ritieni, Alberto; Mañes, Jordi (၂၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄) ။ "အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအစာခြေမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြု။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှ glucoraphanin ၏ဇီဝလက်လှမ်းမှီနိုင်မှု" ။ CyTA - အစားအစာဂျာနယ်။ 26 (2014): 13-3 ။ Doi: 361 / 365 ။
 Fahey, Jed W ။ ; Holtzclaw, ဒဗလျူဒါဝိဒ်; Wehage, Scott L ကို။ ; Wade, Kristina L ကို။ ; Stephenson ကကက်သရင်းငွေကျပ်။ Talalay, Paul; Mukhopadhyay, Partha (၂၀၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂ ရက်) ။ "Glucoraphanin ကြွယ်ဝသောပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှ Sulforaphane Bioavailability: Active Endogenous Myrosinase မှထိန်းချုပ်မှု" PLOS ONE ။2(2015): e10 ။ Doi: 11 / journal.pone.0140963 ။ PMC 10.1371. PMID 26524341.
Pterostilbene အမှုန့် (537-42-8)
Resveratrol အမှုန့် (501-36-0)
Oleoylethanolamide (OEA) အမှုန့် (111-58-0)
ပင်မစာမျက်နှာ ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း ဘ‌‌လော့ခ် ဆက်သွယ်ရန် ထုတ်ကုန်များ